Shirkadaha Qodayaasha Dhulka Iibka iyo Ijaarka dul Realtyww Info
Waxa daabacay Invision
arag Shirkadaha Qodayaasha Dhulka la daabacay 4 months ago
Booqashada dhulku waxaa loola jeedaa hawl kasta oo wax ka beddaleysa astaamaha muuqda ee aag dhul, oo ay ku jiraan: walxaha nool, sida flora ama fauna; ama waxa caadi ahaan loo yaqaanno beerta, farshaxanka iyo farshaxanka dhirta sii kordheysa iyada oo hadafku yahay abuurista deegaan qurux badan gudaha muuqaalka. walxaha dabiiciga ah sida qaab-dhismeedka dhulka, qaabka dhulka iyo kor u qaadida, ama biyo biyo; iyo waxyaabo aan caadi ahayn sida cimilada iyo xaaladaha nalalka. Soosaareynta dhulku waxay u baahan tahay khibrad xagga dhirta soosaarka iyo farshaxanka ah.